सडक निर्माणका लागि वर्षैपिच्छे जाम गर्नुपर्ने? – AayoMail
सडक निर्माणका लागि वर्षैपिच्छे जाम गर्नुपर्ने?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असार २१ गते १२:०४
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१६ स्थित पुलचोकका स्थानीयवासी हरेक वर्ष वर्षा याममा सडक जाम गर्छन्। सामान्य पानीमै हिलाम्य हुने सडकले दिक्क छन् त्यस क्षेत्रका वासिन्दा।
वर्षापछि सडक हिलाम्यहुँदा स्थानीय सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका छन् उनीहरू। सडक मर्मत गर्न पुलचोकका स्थानीयले हरेक वर्ष सडक जाम र प्रदर्शन गर्छन्। तर, उनीहरूको मागको सम्बोधन उपमहानगरपालिकाले कहिले गर्दैन।
विरोधप्रदर्शनपछि उपमहानगरपालिकाबाट पुगेका जनप्रतिनिधिले एक दुई टिप्पर ग्राभेल छर्नुबाहेक अरु केही नगर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
वर्षाका कारण सडक फेरी हिलाम्य भएपछि आजित भएका उनीहरूले आइतबार फेरी पुलचोकमा ढाट लगाएर सडक अवरुद्ध गरेका छन्। धनुषाको पूर्वी क्षेत्र सहिदनगर, विदेह, सबैलालगायतका स्थानीय तह जोड्ने पुलचोकका स्थानीयहरूले सडकअवरुद्ध गरेपछि सवारी अवागमन पूर्ण रुपमा ठप्प भएका थिए।
सडक मर्मत सम्भार नुहँदा जलमग्न हुनुका साथै दैनिक दुर्घटना भइरहेको त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरु बताउँछन्। ‘सडक निर्माण गर्न गत वर्षपनि हामीले सडक अवरुद्ध गरेका थियौं,’ स्थानीय धिरेन्द्र साह भन्छन्,‘सडकअवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेपछि सिडिओ स्वयं आएर गत वर्ष नै सडक निर्माण हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, अहिलेसम्म बनेको छैन्।’
हुलाकी सडकअन्तर्गत रहेको उक्त सडक खण्ड निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय नागरिकका साथै सवारी साधन आवतजावतमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ।
वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष रामअशिष पञ्जियारले हुलाकी सडक भएकोले उपमहानगर र वडाले केही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सडक निर्माणलाई तिब्रता दिन प्रदेश र संघीय सरकारलाई पटक पटक तकेदा गरेपनि सुनवाइ नभएका उनले बताए।